Sunwings Harbour view flat flat-Union Island - I-Airbnb
Sunwings Harbour view flat flat-Union Island
Le yindlu yangoku eyi-460 square feet yegumbi elinye lokulala, enethafa eluphahleni ejonge kwizibuko laseClifton.
Le ndlu ibekwe elunxwemeni loluntu lwaseClifton kwaye ikumganyana nje wamanyathelo ambalwa ukusuka ezivenkileni, iindawo zokutyela / iikhefi, iimarike, kwaye yimizuzu eli-10 kuphela yokuhamba ukuya elwandle lwekite.
Indawo yi 460 square feet equka:
Igumbi elinye lokulala elinebhedi yobukhulu bukaKumkanikazi zonke iibhedi, ilinen, kunye neeTowels zinikiwe, ke kufuneka uze nezinto zakho zobuqu kuphela.
Iyunithi ibandakanya ikhitshi epheleleyo, i-air conditioner, amanzi ashushu nabandayo, igumbi lokuhlala, i-dishwasher, i-cable TV, i-Netflix, i-wifi, igumbi lokulala kunye ne-queen bed kunye ne-closet yempahla, igumbi lokuhlambela elikhulu.
Relax kwigumbi lokuhlala elibanzi elineesofa zalo ezitofotofo kunye negumbi elininzi lomntu wonke.
Ukubonelela ngeembono ezintle zolwandle kwiZiqithi ezingabamelwane ezifana neSiqithi esonwabileyo, iPalm Island, iClifton
i-harbor kunye ne-fort hill yindawo efanelekileyo yokuphumla.
Yimizuzu nje eli-10 ngokuhamba ukusuka kwiziko le-JT PRO. Ukudluliselwa kwemihla ngemihla kunye nezixhobo zakho zekhayithi ziyafumaneka.
Indawo efikelelekayo, egqibeleleyo yokuphonononga iSiqithi, indawo efanelekileyo yekitesurfing. Iikhitha ezinamava zinokuqalisa elunxwemeni amanyathelo angama-20 kuphela ukusuka kwigumbi lakho.
Le ndlu ifanelekile kuye nabani na okuhlahlo lwabiwo-mali ngelixa efuna ukuba kwindawo entle kunye nendawo entle!
Ndiya kuba kwipropati ngexesha lokufika kwakho kwaye ndiya kukunika ulwazi lokufikelela kunye nenombolo yomnxeba.
Nangona kunjalo, ndiyimizuzu emi-5 kuphela xa kukho imeko kaxakeka
Iindwendwe ziyakwazi ukuqhagamshelana kwaye zinxibelelane nam 24hrs ngosuku ngemiyalezo ekhawulezileyo okanye i-imeyile.
Nangona kunjalo, ndiyimizuzu emi-5 kuphela xa kukho imeko kax…